အဆိုပါအားလုံး လှပသောရှုခင်း ခရီးသည်တင်ကားတိုင်းတွင်အမြန်ဆုံးရထားမြင်ကွင်းကျယ်ပြတင်းပေါက်မှမြင်နိုင်သည်. ခရီး Bernina Pass ကိုမှာ culminates. တွင် 7,000 ခြေဘဝါးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်, အဆိုပါ pass တဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နှင်းမုန်တိုင်းမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ဤအတောအတွင်း, နေရောင်များသော အီတလီနိုင်ငံသငျသညျစောငျ့မြျှော ဒီခရီး၏အခြားအဆုံးမှာ. ဤသည်သာယာလှပ ရထားစီးနင်း တိုင်းရထားလမ်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့ရဲ့ပုံးစာရင်းတွင်မဖြစ်မနေဖြစ်သင့်သည်.
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရထားခရီး၏အဘယ်သူမျှမဆွေးနွေးချက် Trans-Siberian Express ကိုအပါအဝင်မပါဘဲပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်. ထို့အပြင်အဖြစ်လူသိများ အရှည်ဆုံးမီးရထားခရီး ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်, Trans-Siberian Express ကိုအရှေ့ရုရှား Vladivostok ၏ကမ်းရိုးတန်းမြို့အနောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုချိတ်ဆက်. လမ်းတစ်လျှောက်, ရထားလမ်းအနီးအနားသို့ထွက်အကိုင်းအခက် တရုတ်လိုနိုင်ငံများ, မွန်ဂိုလီးယား, နှင့်မြောက်ကိုရီးယား. အတွက်အများအပြားနေရာများ အနောက်ဥရောပ, အမ်စတာဒမ်အပါအဝင်, ရှိ မီးရထားဘူတာ ကြောင်းကမ်းလှမ်းချက်ကို Trans-Siberian ဘူတာရုံမှစီး စိန့်. ပီတာစဘတ်, ရုရှားနိုင်ငံ. အများအပြားဥရောပအရှေ့စွန့အခါမီးရထားယူဖို့ရှေးခယျြအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ.
ဤသည်၏အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်များနှင့်မကြာခဏသတိမမူရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ် မီးရထားခရီးသွားလာ. မုချ, လူအများကဲ့သို့ဘာမှမရှိဘူးင် အတွေ့အကြုံများ သင်လမ်းတလျှောက်တွင်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကလူအချို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အဆင်သင့် Get. ဘယ်ဟာကို Cross-တိုင်းပြည်ရထားခရီးသငျသညျပေါ်မှာဆိုရင်, သငျသညျခငျြးကိုနေ့ချင်းညချင်းခရီးသွားများအတွက်အကြားမိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုရှာတွေ့အထိကိုအဆုံးသတ်ဖွယ်ရှိနေ. သင်သာယာလှပ Bernina Express ကိုယူပြီးဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, အဆိုပါ Deutsche Bahn သို့မဟုတ် Trans-Siberian Express ကိုဖြစ်စေအပေါ်အများအပြားနိုင်ငံတွေကိုဖြတ်သန်း, သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ Glacier Express ကိုအပေါ်လျှော့ပေါ့, အဆိုပါယဉ်ကျေးမှုခရီးစဉ်ဟာ Bernina ၏မြင်ကွင်းများအပြိုင်ခရီးတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်, ရထားခရီးသင်၏အသက်တာ၏အရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အတွေ့အကြုံများတဦးဖြစ်ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်.
သင်၏ဘဝတွင်အကောင်းဆုံးရထားအတွေ့အကြုံရရန်, စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းများမှာ, နှင့် obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစိတ်သက်သာရာရ, အသုံး တစ်ဦးကရထား Save!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffascinating-train-travel-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)